Soo dejisan StaffCop 5.8.887 – Vessoft
WindowsShabakadKormeerka & FalanqayntaStaffCop
Bogga rasmiga ah: StaffCop
StaffCop – software awood leh si ay ula socdaan falalka shaqaalaha ku kombiyuutarada ka shaqeeya. StaffCop aad u saamaxaaya in ay u kormeerto codsiyada socda, websites furan iyo qalabka USB ku xiran. Software ayaa jaraysa fariimaha ka codsiyada kala duwan ee fariimaha iyo kuu ogolaanaya in aad si aad u qabato shaashadda. StaffCop u saamaxaaya in ay aad u hesho warbixin ku saabsan shaqada ee shaqaalaha waqtiga dhabta ah iyo warar sheegaya hawl muddo la cayimay dhalin. Software wuxuu kuu ogol yahay in la ogaado oo looga hortago qaybinta la fasaxin ee macluumaadka shirkadaha qarsoodi ah.
Ilaalinta macluumaadka shirkadaha qarsoodi ah
Socodka in waqtiga dhabta ah
Monitoring codsiyada orodka
Soo dejisan StaffCop
Faallo ku saabsan StaffCop
StaffCop Xirfadaha la xiriira